ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ရကောက်ရေ ရ ...........
What's your name--------------------- ရန်ကုန်သား
A four letter word--------------------- ရသာတဏှာ :)
A boy's name-------------------------- ရန်ရှင်း
A girl's name-------------------------- ရီနွယ်
An occupation------------------------- ရေသည် :)
A color-------------------------------- ရွှေရောင်
something you'll wear------------------ရှပ်အကျီ င်္
A food----------------------------------ရေမုန့် 
Something found in the bath room------ ရေ
A place--------------------------------- ရန်ကုန်
A reason for being late------------------ရေချိန်ကိုက်သွားလို့ ဗျ :D
Something you should shout------------ရေမလာဘူးဗျိုးးးးးးးးးးး
A movie title--------------------------- ရင်ခုန်မိတာအချစ်လား
Something you drink-------------------ရွှေရင်အေး
A music group-------------------------- ရှာတာနှံ့ နေပေမယ့် သိတဲ့ အထဲကော ဂူဂဲမှာကော မတွေ့ လို့ ဒီတစ်ခုတော့ Forgive me please! ပါဗျာ
A type of car--------------------------- ရိန်းဂျား(ကား)
A street name-------------------------- ရွှေလဝင်းလမ်း
The title of sound----------------------- ရန်ကုန်မိုး ရန်ကုန်သား
A verb --------------------------------- ရူး
တက်ဂ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ စိတ်ဆိုးနေပြီးလားတောင်မသိဘူး။ မေ့မျောနေလို့ လေ ..... နောက်ကျတဲ့အတွက် တက်ဂ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်တဲ့ ကိုတလနွန်၊ အစ်မချိုကိုသဇင် တို့ ကို အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ခင်မင်မှု နဲ့သတိတရ တက်ဂ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...... တဆက်တည်း နေ့ အိမ်မက် နဲ့အစ်ကို အောင်သာငယ် တို့ ကိုလည်း ဆက်တိုက် အကြွေးတွေ ဆပ်ပါ့မယ်လို့ ပြောပါရစေ ..... သူငယ်ချင်း နေ့ အိပ်မက်က ဒီကနေ့အကြွေး စတောင်းနေပြီမို့ ပါ ..... :D
Posted by yangonthar at 3:54 AM
Labels: တက်ဂ် ပို့ စ်လေးများ
.နောက်ကျရတဲ့အကြောင်းက ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးထင်တယ် =)
ဟဟ မမယ်ကိုးပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ် :)
ရေသည် တဲ့ (တွေးလည်းတွေးတတ်ပါပေတယ် :P)
အခုလို ရေချိန်ကိုက် (အဟီး မှားလို့ ) မအားမလပ်တဲ့ကြားက ရေးပေးတဲ့အတွက် အားလည်းနာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :D
ရန်ကုန်သားက ရန်ရှင်းနဲ့ အတူ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ရိန်ဂျားကားလေး စီးပြီးတော့ ရွှေလ၀င်းလမ်းက ရေနဂါးသွားကြည့်ပြီး အပြန် ရင်တွေပူလို့ ရွှေရင်အေးလေးနဲ့ရေမုန့် သောက်နေတုန်း ရီနွယ်ကိုမြင်လိုက်တော့ ရင်ခုန်မိတာ အချစ်လားလို့ အော်ပြောလိုက်တာ ရေတွေဖိတ်ကုန်လို့ ရှပ်အင်္ကျီ တခုလုံး ရေရွှဲပြီး စိုသွားပါလေရော အဟားဟား
ဒီပို့ စ်ရေးဖို့ နောက်ကျနေတာကရော... ???? ဟဲဟဲ
မောင်လေးရေ နာမည်ထဲမှာ "ရ" ပါရင်သတိထားနော်။ ထပ်ပြီး တဂ့်ခံရမယ်။ ကြည့်ရတာ နေ့အိမ်မက်နဲ့တော့ တွေ့ပြီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။း)
ရည်းစားကိုတော့ရေချိန်ကိုက်သွားလို့နောက်ကျသွားတယ်လို့အကြောင်းပြချက်မပေးနဲ့ နော်
့ အလုပ်ထဲမှာ ရူးချင်သလိုလိုဖြစ်နေတာတော့ ကြာပြီ
ရ ကောက်တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ရွှေရင်အေးပါပဲ ဟေ့ဟေ့
music group က အလန်ပဲနော် နာမည်က ဟိဟိ
ရေမုန့်လဲ ကြိုက်တယ် မရီနွယ်လေးလဲ ကြိုက်တယ် ပြောပေးနော် :)
ရေချိန်ကိုက်သွားလို့တဲ့.. ဆိုးပါ့ ကိုရန်ကုန်သားရေ..
ရေသည် တစ်ယောက် ရေချိန်ကိုက်ပြီး ရူး... ရူး.. ဟီး ဘာမှပြောတော့ဘူး ပြန်ဘီ... တာ့တာ..
ရွှေရင်အေး အတူတူသောက်ခဲ့ကြသေးတာပေါ့.. :D
ရန်ကုန်သားနဲ့ ရန်ကုန်မိုးသီချင်းကို အော်ဆိုနေတုန်း.
ရူး လေသတည်.. ha ha hahaaaa :D
ရင်ကောင်မိတာ အရှင်ပေါ့ လေ ရန်ကုန်သား . . .
ဆိုပြီး ရွှေရင်အေးသောက်ပြီး ရေချိန်ကိုက်သွားတယ် :D
အကို ခုထိရှာမရလို့ မရေးရသေးဘူး
ရှာရ ခက်မှ ခက်ပဲနော်
ရေသယ်ရင်းရေချိန်ကိုက်သွားတာလား... သယ်တာရေမှဟုတ်ရဲ့လား :D
ဘလော့ရေးသူတွေထဲမှာတော့ ရန်ကုန်သားရဲ့ ရသစာပေက တခေတ်ဆန်းသစ်အုံးမှာပါ...
ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ စမ်းချောင်းသား ရေချိန်ကိုက်ပြီး ရွှေလ၀င်းလမ်းပေါ်မှာ..ရူးသွပ်နေတယ်။ :P
Musical group is Yangon thar and companions pot kwa.
သူတို့ မသိဘူးဆိုရင် နာမည်မကြီးသေးလို့ လို့ပြောလိုက်
yat sat pa ma gyee war yal :)
ငါ့ညီ Music Groupမသိသေးရင် အကိုဆီကိုလာကြည့်လှည့်။
ရွှေရင်အေးလေး သောက်ပြီး စာတွေ ဖတ်သွားတယ်
ငါ ဒီည ရကောက်ပြန်တော့မယ်ဟ။
သတိတရ မှတ်မှတ်ရရ ရကောက်လာဖတ်တယ်။
ရေချိန်ကိုက်ပြီး ရွှေလ၀င်းလမ်းကြားထဲ ရူးကြောင်မူးကြောင် ရမ်းမနေနဲ့ဦးနော်။ ဟဲဟဲ
ရန်နီ (Yanni) ရှိတယ်လေဗျာ...။ မြန်မာကား Drama တွေထဲမှာ ဒီလောက် သူ့တီးလုံးတွေ ထပ်ခါတစ်လဲလဲပါနေတာ :)